News - မိုင်အကွာအဝေးမြင့်မားသောဆီလိုအပ်ပါသလား။
အဟောင်းကိုရယူခြင်းအသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့ကိုအမှန်ခြစ်ဖြစ်စေသည့်အစိတ်အပိုင်းများသည်တစ်ချိန်ကကဲ့သို့မအောင်မြင်ပါ။ ကားတွေအတူတူပါပဲ။ သူတို့ကသူတို့ ၀ တ်ဆင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးရှိယာဉ်ဟောင်းများသည်အရာဝတ္ထုများကိုချောချောမွေ့မွေ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အနည်းငယ်ပိုလိုအပ်သည်။ ဒါကမြင့်မားတဲ့မိုင်အကွာအဝေးရေနံဝင်သောအရပ်ပါပဲ!
သင်ဘဝတွင်နောက်တဖန်ကျန်းမာနေရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းနိုင်သကဲ့သို့သင်၏အသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ တ်မှုန်ဝါးမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်သင်၏ကားကိုမိုင်အကွာအဝေးမြင့်မားသောဆီကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းကိုစတင်သုံးစွဲရန်အချိန်တန်သောအခါသင်မည်သို့သိသနည်း။ မိုင် ၇၅၀၀၀ နှင့်အထက်ရှိသောမော်တော်ယာဉ်များအတွက်ယခုအချိန်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။
အမည်အရအဓိပ္ပာယ်အရဆိုလျှင်ဤမော်တာဆီအမျိုးအစားသည်မိုင် ၇၅၀၀၀ ကျော်သောမိုင်ပေါင်းများစွာရှိသည့်မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးရှိသောယာဉ်များကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖော်ထုတ်သည်။ ၎င်းသည်အဟောင်းအင်ဂျင်များမှဆီစားသုံးမှု၊ မီးခိုးနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချရန်ကူညီနိုင်သည်။ မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးရေနံယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်ရေနံစိမ့်ဝင်ငွေကို minimize လုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်တယ်။
သငျသညျကားတစ်စီးကိုမထိခိုက်စေဘဲအငယ်ကားများတွင်မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးကိုအသုံးပြုနိူင်သော်လည်းမိုင် ၇၅,၀၀၀ ထက်နည်းသောမော်တော်ယာဉ်များတွင်များသောအားဖြင့်မိုင်အကွာအဝေးရေနံလိပ်စာများသည်များသောအားဖြင့်မပေါ်တတ်ပါ။
မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးရေနံသည်အားကောင်းသော multivitamin ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပြီးအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ထပ်မံ ၀ တ်ဆင်ခြင်းနှင့်မျက်ရည်များကိုတားဆီးပေးသည်။
မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးအတွင်းရှိတံဆိပ်ခတ်အေးစက်များကတံဆိပ်များကိုချဲ့ထွင်ပြီးပြန်လည်နုပျိုစေသဖြင့်သင်၏အင်ဂျင်မှဆီလျော့နည်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ဆီစားသုံးမှုလျော့နည်းခြင်း၊ ဆီပြောင်းလဲမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်လမ်းပေါ်တွင်အင်ဂျင်ပြproblemsနာများနည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးအဆီများတွင်အမျိုးမျိုးသော antioxidant များ၊ ဆပ်ပြာများနှင့် ၀ တ်မှုန်များနှင့်ပွတ်တိုက်အားလျော့နည်းစေသည့်အရာများလည်းပါ ၀ င်သည်။ သူတို့၏အဓိကအတိတ်အင်ဂျင်များအတွက်အကျိုးရှိသည်။ ဤပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသဘာဝအလျောက်တည်ဆောက်ထားသည့်အညစ်အကြေးများနှင့်ရွှံ့နွံများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏အင်ဂျင်သည်ကြောင်တစ်ကောင်နှင့်တူသည်။
Odometer ရှိ ၇၅၀၀၀ ကျော်သောကားများသည်များသောအားဖြင့်မိုင်အကွာအဝေးမြင့်မားသောဆီများမှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။ မိုင်အနည်းငယ်နည်းသောယာဉ်ဟောင်းများသည်လည်းအကျိုးရှိနိုင်သည်။ အင်ဂျင်တံဆိပ်များသည်မိုင်အကွာအဝေးမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုက်စားသွားနိုင်သည်။ ယိုယွင်းနေသောတံဆိပ်များသည်ဆီယိုစိမ့်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆီယိုစိမ့်ခြင်းသည်သင်၏အင်ဂျင်သည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။
သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားရန်သင်ကတိက ၀ တ်ပြုထားပါကပုံမှန်စီစဉ်ထားသောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အထူးသဖြင့်မိုင်အကွာအဝေးမြင့်မားသောရေနံများပြောင်းလဲမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။
§ဆီစားသုံးမှုလျှော့ချခြင်း - မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးရှိသောမော်တာများယိုယွင်းနေသောကြောင့်ငယ်ရွယ်သောကားများထက်မိုင်အကွာအဝေးမြင့်သောမော်တော်ယာဉ်များသည်ဆီများယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးရေနံပျက်စီးနေသောတံဆိပ်များကိုနုပျိုစေသည်, ဒါကြောင့်ရေနံစားသုံးမှုနှင့် burnoff လျော့နည်းစေပါတယ်။
▪အင်ဂျင်ရွှံ့နွံနည်းမှု - အင်ဂျင်ဟောင်းများသည်အခြားမော်တာဆီများမှကျန်ရှိသောအနည်အနှစ်များကိုစုဆောင်းလေ့ရှိသည်။ မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးရေနံတက်ကွဲနှင့်ကျန်နေတဲ့ရွှံ့နွံပျော်။
§ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်မှု - မိုင်အကွာအဝေးမြင့်မားသောမော်တော်ယာဉ်များသည်ငယ်ရွယ်သောကားများထက်ယေဘုယျအားဖြင့် ၀ တ်ဆင်မှုနှင့်မျက်ရည်ကျရသည်။ မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးရေနံအတွက်ထည့်သွင်းသင့်ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုအင်ဂျင်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်။
သင်၏မော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင်မိုင်မည်မျှ (သို့မဟုတ်မည်မျှနည်း) ရှိပါစေမှန်မှန်စီစဉ်ထားသောရေနံအပြောင်းအလဲများသည်သင်၏ကားကိုပိုမိုခေတ်နောက်ကျစေရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အနီးအနားရှိ Firestone အပြည့်အဝအော်တိုစောင့်ရှောက်မှုတွင်သင်၏နောက်ဆီပြောင်းရန်အတွက်သင်သွားသည့်အခါအထူးသဖြင့်သင်၏ကားလမ်းရှိရေနံအစွန်းအထင်းများသတိထားမိခြင်းသို့မဟုတ်အင်ဂျင်မြည်သံကိုကြားခဲ့လျှင်၊ မြင့်မားသောမိုင်အကွာအဝေးရေနံပြောင်းလဲမှုသင်၏ကားလာမည့်ကြီးမားသောသမိုင်းမှတ်တိုင်ရောက်ရန်ကူညီနိုင်!
တံဆိပ်ခတ်အပိုင်း, ဆီလီကွန်ရော်ဘာအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်, အော်တိုဆက်စပ်ပစ္စည်း, ရေနံ groove, အပိုပစ္စည်းများ, ထိန်းချုပ်မှုလက် Bushing,